Frank Lampard oo farta ku fiiqay dhibaatooyinka kooxda Chelsea kaddib guuldarradii Bournemouth – Gool FM
Dajiye December 15, 2019
(London) 15 Dis 2019. Macalinka kooxda Chelsea ee Frank Lampard ayaa la kulmay dhalaceyn kaddib guuldarradii ka soo gaartay shalay kooxda Bournemouth.
Kooxda Bournemouth ayaa guul kaga soo heshay dhigeeda Chelsea oo ay ku booqatay garoonka Stamford Bridge, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 17-aad horyaalka Premier League ee dalka England.
Tani waa guuldarradii labaad eexiriir ah ay la kulantay kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London ee Chelsea horyaalka Premier League, kaddib guuldarradii 0-3 aheyd ee ka soo gaartay Everton wareegii hore.
Frank Lampard ayaa la hadlay warbaahinta kaddib kulankii Bournemouth wuuuna yiri:
“Ma aqaano cabsi, laakiin taageerayaasheena hortooda, way cadahay inaan si fiican u ciyaarin, si aan u helno natiijooyin nagu filan”.
“Ilaa iyo hadda, waxaa jiro waxyaabo badan ee aan ka fikirayo, waxaan sheegay kaddib kulankii Lille inaan ka faa’ideysanin fursado badan, sababtoo ah waxaan abuurnaa wax badan, balse waxaana naga dhasha goolal badan ee doqonimo ah”.
“Maanta ma aheyn maalin aan abuurnay fursado badan, waxaan abuurnay laba ama saddex fursadood waaweyn, waxaana u baahanahay inaan ka faa’ideysano haddii aan dooneynno inaan horumar sameyno”.
Klopp oo ammaanay ciyaartoydiisa Liverpool kaddib guushii ay ka heleen kooxda Watford
Klopp oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Liverpool ee ka qeyb galaya Koobka Kooxaha Adduunka… (Yaa ka maqan yaase ku soo baxay?)